Baabuur Batrool & Olyo midna kaa dooneyn oo marawaxd ku shaqeynaya+SAWIRO – SBC
Baabuur Batrool & Olyo midna kaa dooneyn oo marawaxd ku shaqeynaya+SAWIRO
Posted by editor on May 19, 2012 Comments
Aduunyada waxaa ka jira sicir barar saameeyey qayb kasta oo ka mid ah nolasha min Miyi ilaa iyo magaalo, beeraley & Kaluumaysato, xoolo dhaqato iyo Warshedley, Taajir iyo faqiir, Guri dabaq ah oo maalqabeen degan yahay iyo mid cooshad ah oo xoogsade xamaasha dhex jiifo.
Hadii aanu taaban sicir bararku maciishada oo qofkii aan xisaabtamin iyo midka shilimaadka farahiisa ku xisaabiya waxaan shaki iyo dood ka jirin in qof kasta si uun u sameeyey isbadalka dhaqaale ee dunida ka jira.
Shidaalka ama Saliida oo ah waxyaabaha xiligan ugu muhiimsan aduunka ayaa qiimo kororkii ugu sareeyey ku yimdi taasi oo ay ugu wacan tahay xiisahada siyaadeed iyo dagaalada dunida ka aloosan.
Hadaba nin u dhashay wadanka Shiinaha oo ah Beeraley ayaa wareerka aduun meel iska dhigay, wuxuuna gees isaga riixay kororka dadka Shiinaha oo ah dalka aduunka ugu dadka badan, ninkan ayaa go’aansadey in uu sameysto baabuur aan Shidaal, Oil iyo Biyo midna u baahneyn balse adeegsanaya Marawaxad ku shaqeynaysa dabeysha ama hawada.
Dalka Shiinaha waxaa ku taal carwada Iibinta gawaarida ee dunida ugu weyn, inta badan dadka wadankaasi waxay haystaan lacag ay ku iibsan karaan gawaarida, iyadoo sanad kasta wadooyinka lagu soo fasaxo 50 milyan oo gawaari cusub oo la soo iibsadey, waxaana haatan dalka Shiinaha uu kala wareegayaa dalka Mareykanka Iibka gawaarida.
Taasi macnaheedu waxay tahay in maalin kasta wadooyinka Shiinaha ay ku cararaan 40 kun oo gawaari ah iyagoo cusub ama gacan labaad (second hand) ahaan lagu iibsadey.
55 jir Tang Zhenping wuxuu mudo 15 sano ah ku jirey riyo ah in uu maalin uun shukaanta u qabto baabuur hawada ku shaqeynaya isagoo riyadiisii bishan ka dhabeeyey ka dib markii uu ku guuleystey in uu socodsiiyo baabuur marawaxad kushaqeynaya, kaasi oo uu farsamadiisa wadey mudo sadex bilood ah.
Baabuurkan oo ku shaqeynaya electaric wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo batari uu ku shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo oo kaliya dabeysha, waxaana uga baxdey Tang farsamada gaaran lacag gaaraysa $ 1500 doolar.
Tang Zhenping farsamada baabuurkan warshad iyo garaashyo waa weyn oo casri ah uma adeegsan hooso yar (workshop) ama garaasha gawaarida laga sameeyo oo ku yaal xaafad siigo iyo bus badan oo lagu magacaabo Banjiehe oo mudo saacad ah u jirta magaalada Beijing, ayuu ku farsameeyey gaarigan.
Qalabka ninkan u adeegsadey farsamada baabuurkan dabeysha ku shaqeynaya ayaa wuxuu ka kala keenay meelo kala duwan sida Mootooyinka (Dhugdhuleyda) tan caadiga iyo mid ku shaqeysa Electornic-ga, halka Garaangarta Shukaanta (Steering wheel), Kursiga iyo indhaha (Lights) uu ka soo qaatey baaburka Xiali ee dalka Shiinaha lagu farsameeyo.
Batariga baabuurkan uu ku shaqeynayo ayaan aheyn mid had iyo goor u baahan in la la dabeeyo (charge-gareeyo ) balse hadii hal mar la charge-gareeyo (la dabeeyo) wuxuu awood u leeyahay in baabuurku ku socdo mudo sadex maalmood ah.
Baabuurkan ayaa ilaa 140 Km saacadi jari kara, waxaana marka xawaarihiisu uu dhaafo 40 km ay marawaxadu u keeni kartaa awood dheeraad ah, iyadoo Mr Tang uu sheegay in gaarigan mudo 15 sano ah uu niyada ku hayey sidii u farsameyn lahaa balse uu waysanaa cid dhaqaale ku taageerta, waxaana uu xusey in hadii uu heli lahaa fikradan dhaqaale la sameyn karo baabuur ka wanaagsan, isagoo rajo ka muujiyey shirkada gawaarida farsameeya in ay fikirkiisa qaadan doonaan.
“Gaarigeygu wuxuu ku yimid riyo mudo niyada iiga taagneyd oo aheyd in aan mar uun dadka ugu adeego oo wadooyinka uu ku cararo, tanina ma ahan mid aan lacag uun kaliya ah” ayuu yiri Mr Tang oo u waramayey Telefishinak Sky News ee magaalada London xaruntiisu tahay.